तिब्र आलोचना र तुच्छ बचनको प्रबाह नगरि आयुष्मानले प्रियंकाले बेबी सावर के पेटमा हुर्कदै गरेको बच्चाको लिंग पहिचान भएकै हो ? – Khabar Patrika Np
तिब्र आलोचना र तुच्छ बचनको प्रबाह नगरि आयुष्मानले प्रियंकाले बेबी सावर के पेटमा हुर्कदै गरेको बच्चाको लिंग पहिचान भएकै हो ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ २७, २०७८ समय: २१:४०:३६
पछिल्लो समय सबैभन्दा बढि आलोचीत र ट्रोल बन्ने गरेकी छिन् नायिका प्रियंका कार्की । उनी अहिले गर्भवती अवस्थामा रहेकी छिन् । पछिल्लो समय काम गर्न छोडेकी उनी सामाजिक सञ्जालमा एकदमै सक्रिय रहेकी छिन् । यो अवस्थामा प्रियंका लाई भरपुर साथ दिईरहेका छन् उनका श्रीमान् अर्थात नायक आयुष्मान देशराजले ।
उनीहरुले आफ्नै तरिकाले जिन्दगी अघि बढाईरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आउने नकरात्मक कमेन्टलाई उनीहरुले बालै दिएका छैनन् । प्रियंका गर्भवती भए देखी नै उनीहरुले एक अर्का संग एकदमै खुशी शेयर गरिरहेका छन् । यसको जानकारी उनीहरुले सामाजिक सञ्जाल बाट आफ्ना फ्यानहरु लाई दिईरहेका छन् ।
प्रियंकाले आफु गर्भवती भएको फोटोहरु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्ष्टा बाट सार्वजनिक गरिनै रहेकी हुन्छिन् । उनको यो नीजि बिषय हो तर पनि कतिपय दर्शकले भने अनेकौ नराम्रा कमेन्टहरु गरिरहेको देख्न सकिन्छ । यति अश्लिल शब्दहरुको प्रयोग भएको हुन्छ कि कमेन्ट गर्नेहरुको आमा दिदि बहिनीहरुले पढ्नै, हेर्नै नसक्ने हुन्छन् । तर पनि यति आलोचना हुँदा हुदै पनि उनीहरुले खुशी साटि नै रहेका छन् ।
प्रियंकाको बेबी सावर
तिब्र आलोचना र तुच्छ बचनको प्रबाह नगरि प्रियंकाले बेबी सावर गरेकी छिन् । साथीहरुले ‘बेबी सावर’को आयोजना गरेर खुशी मनाएको केही दि ननबित्दै फेरि उनका श्रीमान् आयुष्मानले पनि ‘बेबी सावर’ गरिदिएका छन् । प्रियंकाले आफुहरु दुबै जना नयाँ सन्तानको आगमन हुने भएपछि एकदमै खुशी भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् ।
प्रियंकाले आफ्नो पेटमा एउटा यस्तो जीवन हुर्किरहेको छ भन्दै जसलाई प्रेम, खुशी, सन्तुष्टी र नयाँ सुरुवातका लागि तयार राखेको उल्लेख गरेकी छिन् । उनले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत यस्तो लेखेकी हुन् । त्यतिमात्र हैन उनले आफ्नो श्रीमान् आयुष्मान आफ्ना लागि सबैथोक भएको पनि बताएकी छिन् ।
उनको बेबी सावरमा पिंक कलर प्रयोग गरिएको र आयंका लेखिएकोले पनि यो अनुमान गर्न सकिन्छ कि उनको गर्भमा सानी प्रियंका हुर्किरहेकी छिन् । पिंक कलरले छोरीको संकेत गर्दछ । बिशेष गरेर बिदेश तिर लिंग पहिचान भएपछि बेबी सावर गर्ने चलन छ । तर नेपालमा लिंग पहिचान चिकित्सकले गरे पनि आमा बुवालाई जानकारी दिईने गरिएको छैन ।